तिथि मेरो पत्रु » आफ्नो पाल्तु जनावर संग कार द्वारा यात्रा
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 16 2020 |5मिनेट पढ्न
उनीहरूले साथ जान चाहन्छौं थाह – किन तिनीहरूलाई लिन?
बनाउन आफ्नो पाल्तु जनावर र स्वस्थ निश्चित, आफ्नो डाक्टर संग एक यात्रा तालिका, र कारण हो कि कुनै पनि शट नविकरण. केही होटल अब आफ्नो पाल्तु शट रेकर्ड वर्तमान छ कि तपाईं प्रमाण देखाउन आवश्यक छ कि.
तिनीहरूलाई कबाडी को एक उपचार दिन निश्चित हुनुहोस् र केही क्षेत्रहरु fleas र किर्नाले संग infested हुन सक्छ रूपमा औषधी टिकटिक. Heartworm औषधी उपचार लामखुट्टेको आफ्नो पाल्तु जनावर संक्रमित गर्न सक्छन् पछि सिफारिस गरिएको छ.
आफ्नो आपूर्ति जाँच: (तपाईं यसलाई प्राप्त गर्न सक्छन् जहाँ एउटा सानो झोला मा आफ्नो पाल्तु जनावर सामान सबै प्याक)
एक पट्टा र कलर, घरपालुवा नाम ट्याग (कसैले जवाफ हुनेछ जहाँ आषा यसलाई मा एक फोन नम्बर छ, एक सेल फोन नम्बर ठूलो छ).
पानी को बोतल, र एक पानी पकवान (फैल छैन भनेर अधिमानतः प्रकारको)
आफ्नो पाल्तु जनावर खानाको आपूर्ति, एक पकवान र शायद एक चम्चा, र व्यवहार भुल्ने छैन
एक पालतू ब्रश, तपाईं एक हप्ता वा बढी लागि गएका हुन जाँदैछन् भने शैंपू पालतू
खेलौना वा दुई, र केहि तिनीहरूलाई सुत्न लागि.
उनको चिकित्सा आपूर्ति भुल्ने छैन:
कुनै पनि दबाइ
Burrs हटाउने लागि चिमटी
आँखा सफाई बगे
एक पालतू सहनशीलता यन्त्र (मात्र जाते आफ्नो सुरक्षा बेल्ट जस्तै)
आफ्नो पाल्तु जनावर पछि टिप्न लागि प्लास्टिक बैग.
तपाईं गएँ अघि आफ्नो पाल्तु जनावर धेरै घन्टा एक हल्का भोजन खुवाउने र तपाईं आफ्नो यात्रा सुरु हुनुभन्दा त एक लामो पैदल लागि लिन्छन्.
कार रोग व्यवहार हो जब पहिलो कुरा महसुस गर्न 95% घटनामा को यो तनाव सम्बन्धित र छैन गति सम्बन्धित छ. तपाईंको पाल्तु जनावर आफ्नो पहिलो घर टाढा लगिएको संग एक कार यात्रा बताउन सक्छन्, वा डाक्टर वा यात्रा झनै, यो कुकुरको खोर. त्यसैले, एक कार मा पछि सवारी धेरै बलियो मानसिक र पछि शारीरिक आघात पिरोल्न गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो अचम्मको कुरा होइन.
एक कार मा यात्रा तिर पुन-कार्यक्रम आफ्नो पाल्तु मनोवृत्ति. लगभग एक पार्क खोज्नुहोस् 5-10 घर देखि मिनेट, आदर्श पनि कार मा कुनै छ, कुकुर शान्त र सवारी तिनलाई अलमल्याउन. पार्क गर्न खुसी सबै तरिका उहाँको राख्नुहोस्. पार्क मा सबै रमाइलो कुरा के कहिले कुकुर प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर, बल ल्याउन, र फ्रिसबी पीछा. पार्क मा प्रवास त्यो लामो हुन आवश्यक छैन…. बस सकेसम्म रमाइलो. त्यसपछि पार्कमा तपाईं जस्तै घर कुकुर को बस धेरै रूपमा जायका गर्दा फेरि उहाँलाई सबै बाटो सुखदायक कुकुर घर चलाउनु र. आफ्नो भोजन संग सत्र वा व्यवहार समाप्त यदि समय र अवस्था अनुमति.
अब तपाईंको पाल्तु जनावर अब मजा पटक संग कार यात्रा सम्बद्ध.
खाली मा यात्रा. यो एक सडक यात्रा मा embarking अघि छ देखि आठ घण्टा आफ्नो पाल्तु जनावर खुवाउन एक राम्रो विचार छ. खाली पेट भएको अप फेंक उहाँलाई कम संभावना हुनेछ, र उहाँले बिरामी गर्छ भने, त्यहाँ उल्टी कुनै खाना छ, त्यसैले कम्तीमा यो सफा गर्न सजिलो हुन्छ. आफ्नो पाल्तु जनावर पानी दिने, तथापि, आफ्नो पेट परेशान छैन र उहाँलाई अझ सहज बनाउन सक्छ.
अथवा एक चौथाई-ट्यांक मा राखे. केही घरपालुवा जनावरको खाली पेट मा सबै भन्दा राम्रो यात्रा गर्दा, अरूलाई सानो भोज खाने पछि अधिक आरामदायक महसुस हुनेछ. केही घरपालुवा जनावरको बस मदत बिरामी देखि राख्न आफ्नो पेट मा एक सानो भोजन चाहिन्छ.
लगातार बाँकी सलिुहोला. केही घरपालुवा जनावरको समस्या बिना घण्टा यात्रा गर्न सक्छन् जबकि, अरूलाई केही किलोमिटर पछि मिचली रही शुरू. आफ्नो पाल्तु जनावर आफ्नो भूमि-खुट्टा फिर्ता प्राप्त गर्न को लागि आफ्नो पाल्तु नमुना थाहा र छिटो हिँडाइ लिन कम्तीमा हरेक घण्टा वा दुई रोक्न प्राप्त. यो पनि उहाँलाई एक सानो पानी खन्याउन एक राम्रो विचार हो, रक्सी महसुस भएकोले उहाँले कार मा छ जब.
उहाँलाई संग-सामने हुनुहोस्. फिर्ता जस्तै कार को सामने धेरै आन्दोलन त्यहाँ छैन, तिमी उसलाई सामने सीट मा सवारी गरौं भने त यो आफ्नो पाल्तु जनावर मदत सक्छ, तर तिनीहरूले सीट मा कि buckles एक doggy सीट बेल्ट वा सानो कुत्ताघर मा सुनिश्चित.
आफ्नो क्षितिज विस्तार. जनावर, मान्छे जस्तै, तिनीहरूले पारित दृश्यहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जब carsick प्राप्त हुने सम्भावना कम हुन्छ.
झ्याल तल सनकी. ताजा हावा एक सानो carsick महसूस जसले कुनै को लागि राम्रो छ, आफ्नो कुकुर या बिल्ली सहित, उहाँले उम्कन वा बाहिर आफ्नो टाउको तरिका प्राप्त गर्न सक्छन् तर पर्याप्त सञ्झ्याल खोल्न छैन.
एक प्रस्ताव औषधि प्रयास. Dimenhydrinate (केही Dramamine) — एउटै दबाइ मान्छे कार रोग प्रतिरोध गर्न लिन — पनि घरपालुवा जनावरको लागि काम गर्दछ. ठूलो कुकुर मध्यम दिनुपर्ने 25 गर्न 50 Dramamine को मिलीग्राम कम्तीमा एक घण्टा यात्रा अघि, बिरालोहरु र साना कुकुरहरूको बारेमा प्राप्त गर्नुपर्छ 12.5 मिलीग्राम. आफ्नो पाल्तु जनावर कुनै पनि औषधीय उत्पादन दिन देखि पहिले आफ्नो डाक्टर संग जाँच गर्न निश्चित हुनुहोस्.
तपाईंको कार तैयारी
आफ्नो पाल्तु जनावर सुरक्षित सवारी र अझै पनि झ्यालबाट बाहिर हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ सिर्जना, र तपाईं छोयो गर्न सक्षम हुन. तपाईं ड्राइभिङ्ग गर्दै छन्, जबकि आफ्नो काखमा बसिरहेका सबै भन्दा राम्रो विचार छैन. उनीहरू आफ्नो पानी पहुँच आवश्यक हुनेछ.
एक कम्बल वा नरम पाल्तु जनावर ओछ्यानमा महान हुनेछ त्यसैले तिनीहरू घरमा महसुस.
यो सहनशीलता यन्त्र भुल्ने छैन, के तपाईं अचानक रोक्न भने तिनीहरूलाई विंडशील्ड माध्यम ले उडान चाहँदैनन्.
आफ्नो बिरालो तपाईंसँग यात्रा गरिन्छ भने किट्टी फोहर फाल्न लागि ठाउँ बनाउन. पछि अगाडि सीट केही कार मा राम्रो काम गर्दछ. पहिलो प्लास्टिक को एक टुक्रा पल्टिने (एक रद्दी झोला गर्नेछ).
राजमार्ग तल यात्रा
संभावना तिनीहरूले विन्डो देख रहे छैनन् जब बाहिर वा तपाईँले पाल्तु जनावर र प्राप्त तपाईंको पाल्तु जनावर समय नब्बे प्रतिशत सुत्न हुनेछ छन्.
तपाईं हरेक रोक्न आवश्यक2गर्न3घण्टा FiDo आफ्नो खुट्टा पसार्नु दिनु.
कार एक्लै कहिल्यै तिनीहरूलाई बिदा
आधुनिक कार वस्तुतः हावा तंग छन् र एक कार एक्लै बाँकी एक पाल्तु जनावर पर्याप्त हावा प्राप्त गर्न को जोखिममा छ, वा गर्मी पीडित. समेत हावा तापमान मात्र छ यद्यपि 70 सूर्य मा एक कार धेरै तातो प्राप्त गर्न सक्छन् डिग्री.
एक रात MOTEL मा
आशा गरौं तपाईं पत्रु यात्रा वेब साइट जाँच र अनलाइन घरपालुवा अनुकूल होटल या मोटल बुक. होटल / मोटल शुल्क भने घरपालुवा शुल्क यो तिर्न, आफ्नो पाल्तु जनावर लुकाउने प्रयास गर्छन्, तपाईं पत्ता बारेमा चिन्ता सबै रात खर्च हुनेछ.
के तपाईं Fido संग एक पैदल लिन सक्छ इलाकामा नजिकै एक भूमि तल कोठा लागि सोध्न आइपुग्दा. केन्द्र चोकमा सही ठाँउ छैन. होटल / मोटेल पाल्तु जनावर अनुकूल रहनेछ भनेर आफ्नो पाल्तु जनावर पछि टिप्न निश्चित हुनुहोस्.
सबैभन्दा आवास तपाईं स्पष्ट कारण कोठा मा एक्लै पाल्तु जनावर नछोड भनेर सोध्न. तपाईं आदेश बाहिर ले वा कोठा सेवा हुन सक्छ, वा यसलाई पर्याप्त सुन्दर छ भने आफ्नो पाल्तु जनावर आधा घण्टा कार बायाँ गर्न सकिन्छ या त तपाईं खाने बाहिर जाने र तिनीहरूलाई साथ लिन सक्छ लागि. तपाईं पनि एक पाल्तु जनावर अनुकूल रेस्टुरेन्ट पाउन सक्छ, पेटी क्याफे जस्तै बाहिर बस्ने क्षेत्रमा स्थानहरु खोज्न.
तपाईं आफ्नो गन्तव्यमा आउनुभएको
आफ्नो नयाँ घर वरिपरि आफ्नो पाल्तु जनावर देखाउन, तपाईं आफ्नो भोजन राखेको छु जहाँ, पानी, र ओछ्यानमा.
आफ्नो पाल्तु जनावर एक बिल्ली छ भने, तिनीहरूलाई किटी कूडे को बक्स को स्थान देखाउन. त्यो पनि जाना छ जहाँ fido जान्नु आवश्यक हुनेछ.
अब तपाईं आफ्नो सबै भन्दा राम्रो मित्र को कम्पनी मा आफ्नो छुट्टी आनन्द उठाउन तयार छन्.